Photo Lab Picture Editor: face effects, art frames 3.8.9 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.8.9 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Application မ်ား ဓာတ္ပံုဆိုင္ရာ Photo Lab Picture Editor: face effects, art frames
Photo Lab Picture Editor: face effects, art frames ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ရက်စွဲကိုကျော် 900 သက်ရောက်မှု: ဓာတ်ပုံ Lab ကစတိုင်နဲ့ရယ်စရာဓာတ်ပုံကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏ vastest collection များကိုများထဲမှဝါကြွားတတ်! Fantastic မျက်နှာဓာတ်ပုံကို Montage ကိုသင်ခံစားရန်အဘို့အဓါတ်ပုံကိုဘောင်, ကာတွန်းဆိုးကျိုးများနှင့် photo filters ကဒီမှာရှိပါတယ်။
သင့်ရဲ့ image ကိုတစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အယ်ဒီတာမသုံးဘဲစက္ကန့်အတွင်းဖန်တီးမှုကိုကြည့် Make နှင့်တစ်ဦးအဆက်အသွယ်အိုင်ကွန်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတစ်နောက်ခံပုံများ, မိတ်ဆွေတစ်ဦးမှတစ်ဦးလက်မှတ်ရေးထိုးကို virtual ပို့စကတ်ပေးပို့သို့မဟုတ်မည်သည့်လူမှုကွန်ယက်မှမျှဝေ။
App ကိုဖွင့်ဗွေဆော် features တွေပါဝင်သည်:
☆ ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောအနုပညာ Styles :
50 ကျော် Pre-set ကိုစတိုင်များကနေရှေးခယျြ - တစ်အနုပညာလက်ရာများသို့မဆိုဓါတ်ပုံကိုဖွင့်ပေးရန်အသစ်တစ်ခုကိုစမတ် (နှင့်အမြန်) လမ်း။
☆ ဓာတ်ပုံဘောင် :
☆ အတိုငျးဓာတ်ပုံကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ :
တစ်ခုမဖြစ်နိုင် setting ကို၌သင်တို့၏ပုံရိပ်ထားပါ။ တစ်ဦးသီးသန့်ကားတစ်စီးပေါ်မှာဆေးမှုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကမ်းခြေပေါ်မှာသဲ Imprint အဖြစ်ကစွန့်ခွာ။ သငျသညျသစ်တစ်ခုအံ့သြဖွယ်အတွေ့အကြုံအရကြိုဆိုများမှာ!
☆ မျက်နှာဓာတ်ပုံကို Montage :
အလွယ်တကူမကျြနှာကိုဖလှယ်ခြင်းနှင့်, ပင်လယ်ဓားပြသို့ထားတဲ့အာကာသယာဉ်မှူးသို့မဟုတ်ကြောက်မက်ဘွယ်သောနဂါးသင်ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်သင့်မိတ်ဆွေတစ်လှည့်။ အများဆုံးရှုပ်ထွေး Montage အရှိဆုံးပုံမှန်မဟုတ်သော selfies ကိုဖန်တီးရန်တစ်ဦးမျက်နှာထောက်လှမ်း algorithm ကိုအလိုအလျောက်ကိုင်တွယ်လျက်ရှိသည်။
☆ ဓာတ်ပုံ filter များ :
သငျသညျထိုကဲ့သို့သော Black & White, နီယွန် Glow, ရေနံပန်းချီနှင့်အခြားသောအဖြစ်အမျိုးမျိုးသော photo filters နှင့်သင်၏ပုံရိပ်တွေအချို့စတိုင် add ဖို့လိုလားတဲ့ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာမလိုအပ်ပါဘူး။
☆ ဓာတ်ပုံ Collage :
သင်နှင့်တစ်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့သို့မဟုတ်အနာဂတ် setting ကိုအတွက်အတူတကွ floating သင်၏အဆွေခင်ပွန်းတစ်အံ့သြဖွယ်ရုပ်ပုံဖန်တီးပါ။
အဆိုပါရိုးရှင်းပြီးအလိုလိုသိ app ကို interface ကိုသငျသညျမွနျမွနျပုံအယ်ဒီတာသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူကူညီပေးသည်။ အသစ်ကဓာတ်ပုံကိုဘောင်နှင့်ဆိုးကျိုးများနီးပါးတစ်ဒါဇင်တစ်ခုချင်းစီကို update ကိုအတူထည့်သွင်းထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများနှင့်အသီးအနှံများတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်။ သင်စာကြည့်တိုက်အတွက်အထူးသဖြင့်ဓာတ်ပုံကိုအကျိုးသက်ရောက်မတှေ့လြှငျ, အဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်နှငျ့သငျနောက်တစ်နေ့ update ကိုအတွက်မြင်ရပေလိမ့်မည်။
ကိုဓာတ်ပုံ Lab မှအစဉ်အမြဲသင်၏အသက်တာကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ် သည် *
* ဓာတ်ပုံ Lab မှသို့မဟုတ်သင့်အသက်တာကိုပြောင်းလဲသွားမည်မဟုတ်ပါစေခြင်းငှါသင်တို့မူကားလုံးဝကြောင့်ကိုချစ်တာပေါ့!
ဓာတ်ပုံ Lab မှအင်တာနက်-based application ဖြစ်ပါတယ်သတိပြုပါ။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုသင်၏ဓါတ်ပုံများ၏အရည်အသွေးမြင့်အနုပညာလက်ရာများကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်သောအရင်းအမြစ်များတန်ချိန်ကနေအခမဲ့သင်၏ကိရိယာများ '' မှတ်ဥာဏ်ကိုစောင့်ရှောက်ကူညီပေးသည်။
🎉 ps: ဓါတ်ပုံ Lab က app ကိုတရားဝင် Google က, ရုရှား အားဖြင့် 2017 ရဲ့အကောင်းဆုံး apps များထဲကတစ်ခုထုတ်ပြန်ကြေညာတာဖြစ်ပါတယ်🎉
Photo Lab Picture Editor: face effects, art frames အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Photo Lab Picture Editor: face effects, art frames အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Photo Lab Picture Editor: face effects, art frames အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Photo Lab Picture Editor: face effects, art frames အား အခ်က္ျပပါ
0hilol0 စတိုး 1 1.6k
Photo Lab Picture Editor: face effects, art frames ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Photo Lab Picture Editor: face effects, art frames အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.8.9
ထုတ်လုပ်သူ Nik Software, Inc.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://pho.to/policy.php
App Name: Photo Lab Picture Editor: face effects, art frames
File Size: 44.8MB
Release date: 2019-07-04 15:50:53
အထောက်အပံ့ပေးနိုင်သော စီပီယူ: x86, x86-64, armeabi, armeabi-v7a, arm64-v8a, mips
လက်မှတ် SHA1: D1:22:D9:AD:C3:E5:D5:FF:34:6B:32:C0:41:3F:5C:F3:A3:CC:46:58
နိုင်ငံ (C): debugging
Photo Lab Picture Editor: face effects, art frames APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ